Doctors On Wheels | Myanmar | Group Health Care, Health Screening, Consultation & Treatment, Health Talk
No. 234 , Kaw Li Ya Road, 13 Ward, South Okkalapa Township , Yangon .
+ 959442 333 535
+ 95996 1211 300
959442 333 535
About Doctors On Wheels
Doctors On Wheels is founded byafamily physician who has clinical and public health experience. She worked at medical screening and home care services in Singapore and return to Myanmar to serve the people with home based comprehensive care approach.
အိမ်တိုင်ရာရောက်ဆေးကုသခြင်း၊ လူကြီးမိဘများ ကျန်းမာရေး ပုံမှန် စစ်ဆေး ကုသခြင်း။
နှလုံး ECG ရိုက်ခြင်း ၊ X-Ray ရိုက်ခြင်း ၊ Ultrasound ရိုက်ခြင်း ၊ သွေးစစ်ခြင်း ၊သွေးတွင်းမှ cancer marker စစ်ခြင်း
၀န်ထမ်းများ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း၊ အလုပ်မ၀င်မီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၊နိုင်ငံခြားမသွားမီ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း
We are pleased to inform that we can arrange the following services for Clients under Health care Insurance.
Doctors On Wheels ရဲ့Team မှ ဆရာဝန်ပင့်ပါက ရရှိမည့် service competency , Healthcare quality နှင့် facility အကြောင်း မေးမြန်း ကြသော မိဘ ဘိုးဘွားများ အတွက် ရှင်းပြပါရစေ။
၁ - ဆရာဝန်ပင့် တဲ့အခါ ဆရာဝန်တယောက် nurse နှစ်ယောက် Doctors On Wheels စတစ်ကာ ကပ်ထားသော အဖွဲ့ ကားဖြင့် လာရောက်ကုသပေးပါသည်။
၂ - ကားတစ်စင်းတိုင်းမှာ ချွဲစုပ်စက်, ECG , Nebulizer ခေါ် ရင်ကြပ်ရှူဆေး စက် ,Haemoglobin သွေးအားနည်း စစ် စက် , ဆီးချိုစစ်စက် ,သွေးတွင်း oxygen စစ် စက် ,လက်ကြွက်သားအား စစ်စက် ,TENS ကြွက်သားနာကျဉ်မှု သက်သာစေသောစက် စသော စက်ကိရိယာများလိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင် ရန်တစ်ပါတည်း ပါလာမှာဖြစ်ပါသည်။
၃ - ဆရာဝန်သုံးအခြား ကိရီယာ များ လည်းပါပါ သည်။ Emergency Box ခေါ် အရေးပေါ် ကုသရန် ထိုးဆေး များDrip များလည်း တပါတည်းပါပါသည်။
၄ - အခြားသော သောက်ဆေး များကို လည်း လိုအပ်လျင်ပေးနိုင်ဖို့ ဆေးခန်းမှာရှိသင့်သော ဆေး စာရင်း များ အတိုင်း တပါတည်းပါပါသည်။
၅ - ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးဝယ်သောက်မယ်ဆိုလည်း ဆေးစာရေးပေးခဲ့ပါသည်။
၆ - တာဝန်ခံ ဆရာဝန်များ သည် Weekday များ တွင် လုပ်သက်ရှိ senior ဆရာဝန်များ၊ ဆေးရုံ လက်ရှိဆရာဝန်များ ( သူတို့ရဲ့ day off) များ တွင်ကုသပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၇ - စနေ ၊တနင်္ဂနွေ နှင့် အခြား holiday များတွင်တော့ PG doctor ဟုခေါ်သော ဘွဲ့လွန် သင်တန်း တက်နေသော ဆရာဝန်များမှ ကြည့်ရှု ကုသပေးပါသည်။
၈ - ဆရာဝန်အားလုံးသည် patient အိမ်တွင် အနည်းဆုံး ၄၅ မိနစ် မှ ၁ နာရီခွဲ ခန့်အထိ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးကုသပေးပါသည်။ Team တခု သည် တနေ့ လျင် လူ နာ ၅ အိမ်ထက် ပို မကြည့် ပါ။ ပိုမချိန်းပါ။ Quality care ရစေလျင်လို့ပါ။
၉ - Specialist များမှာဆေးရုံကြီးများမှ Senior Consultant အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ Weekend holidays များမှာ ကြည့်ရှုကုသပေးပါသည်။
၁၀ - တာဝန်ခံဆရာဝန်ကုသခြင်းများ အတွက်လည်း တာဝန်ခံ ဆရာဝန် မှ လိုအပ်သော တိုင်ပင်ခြင်းများ အတွက် သမားတော်များက အမြဲတမ်း ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ Supervision အခမဲ့ လုပ်ပေးထားပါသည်။
၁၁ - ထို့အပြင် မိမိ ကို ကုသပေးသော တာဝန်ခံ ဆရာဝန်များထံ နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအတွင်းအခမဲ့ ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသဖြင့် မိသားစု ဆရာဝန် တယောက် ရလိုက် သလို Sense of Security ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါ သည်။
တာဝန်ခံဆရာဝန်က မိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန် Family Physicians တွေနှင့် ဆေးရုံများမှ လုပ်သက်ရ ဆရာဝန်တွေပါ။
Dressing ,အစာပိုက် ဆီးပိုက် လဲလှယ်ဖို့ ကို တော့ ဆေးရုံများမှ အတွေ့ကြုံရှိဆရာဝန်များမှ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
သမားတော်တွေက ဆေးရုံကြီးတွေမှ consultant အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်ကြီးတွေပါ။ ultrasound ရိုက်ရင်လည်း Consultant Radiologist ကိုယ်တိုင် လာရိုက်ပေးမှာပါ။
ကိုယ့်ရောဂါအကြောင်းကို သေချာပြောပြချင်တာ။ ဆရာဝန်က အိမ်လာပြီး ၅ မိနစ်နဲ့ပြန် မှာလား။
တာဝန်ခံဆရာဝန်များမှာ ရောဂါ ရာဇဝင်ကို ဂဂဏဏ မေး၊ လူနာကို သေသေချာချာစမ်းသပ်၊ ကုသခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြ၊ အစားအသောက် အနေထိုင်ပြုပြင်စရာတွေကိုမှာကြား ကြသည်မို့ လူနာတခါကြည့်လျင် အနည်းဆုံးတနာရီကြာပါသည်။
ကြည့်ပြီးလျင်လည်း ထိုဆရာဝန်ထံ ဖုန်းဆက်တိုင်ပင်နိုင်သဖြင့် မိသားစုဆရာဝန် တယောက် ရလိုက်သလို ခံစား ရမှာဖြစ်ပါသည်။
အိမ်လာကြည့်မှာဆိုတော့ ဈေးသိပ်ကြီး မှာ လား။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အတွက် ဆရာဝန်ကြည့်ရှုစမ်းသပ်ခြင်း သူနာပြု မှကူညီခြင်း၊ ကားခ အားလုံးပေါင်းမှ ၂၀၀၀၀ ကျပ်ခန့် သာ ကျသင့်မှာပါ။ သွေးစစ်လျင် ECG ရိုက်လျင်တော့ အပိုဆောင်း ကုန်ကျစရိတ်ရှိမှာပါ။ သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းပါ။
© 2017-2022 Doctors On Wheels, Myanmar. All rights reserved.
Website Builder by NetScriper